Raysal Wasaaraha Itoobiya Oo Kulan Adag La Yeeshay Guddida Difaaca Ee Golaha Wasiirada.
(Hadhwanaagnews) Friday, January 11, 2019 17:36:41
Addis Ababa(HWN):-Guddida difaaca ee dalka Itoobiya ayaa maanta yeeshay kulan muhiim ah.
Shirkan oo uu gudoominayey raysal wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa lagaga hadlay isbadalada dhinaca difaaca ee ka socda dalka, iyada oo lagu falanqeeyey waxyaabaha laga faa,iiday fulinta isbadalo lagu sameeyey qaybaha kala duwan ee difaaca dalka Itoobiya.
Kulankan ayaa sidoo kale lagaga hadlay dib u habayn lagu sameeyo hay’addaha fulinaya isbadalka iyo gaabiska ku yimid fulinta isbadalka, iyada oo haatan laysla qaatay dariiqada loo baahan yahay in loo maro meelaha uu raysal wasaaruhu doonayo in mustaqbalka la gaadho.
Sidoo kale kulankan ayaa dib loogu eegay talaabooyinka la qaaday
si loo hubiyo in dalka Itoobiya iyo shacabkiisu ay u wada taagan yihiin garab istaagida ciidamada difaaca.
Sidoo kale shirkan ayaa si adag loogaga hadlay baahida loo qabo in la dardar galiyo hirgelinta isbadalada ciidamada difaaca iyada oo la wajahayo khatarta dhabta ah iyo xaaladaha hada jira ee qaranka iyo gobolkaba.
Intii kulankani socday ayaa layskula qaatay in ciidamada difaaca la gaadhsiiyo qalabkii ugu dambeeyey ee milatariga isla markaana la dhiso awooda lagu joogtayn karo qalabkaasi isla markaana mid cusub lagu ikhtiraaci karo.